WAREYSI SOMALILAND.NO LA YEELATAY XILDHIBAAN MAXAMED CUMAR JIIR OO KU SUGAN OSLO NORWAY | WWW.SOMALILAND.NO
WAREYSI SOMALILAND.NO LA YEELATAY XILDHIBAAN MAXAMED CUMAR JIIR OO KU SUGAN OSLO NORWAY
Posted on Luulyo 20, 2008 by weriye1
Wareysi Xildhibaan Maxamed Cumar Jiir oo ku sugan Oslo Norway.
Oslo(sl.no) 20july 2008 – Waxa 05/07-08 booqasho ku yimi dalka Norway laba xildhibaan oo ka socda Golaha Wakiilada Somaliland. Labada xildhibaan oo kala ah Mudane Maxamed Cumar Jiir iyo Mudane Axmed Maxamed Diiriye ”Nacnac”. Intii ay joogeen dalka Norway waxay qaateen seminaar ku saabsanaa habka loo maamulo kheyraadka dabiiciga ah (batroolka), waxa siisay shirkad noorweeji ah. Waxa kale oo ay la kulmeen xubin baarlamaanka norway ah. Haddaba wareysigii Xildhibaan Maxamed Cumar Jiir wuxu u dhacay sidan:-
S/ : Xilldhibaan Maxamed maxay salka ku haysay booqashadiinani?
J/: Booqashadayadu waxay salka ku haysay casuumad ay na casuuntay Hay´ad batroolka la shaqeysa oo lagu magacaabo PETRAD oo degan magaalada Stavanger. Hay´adaas oo kala talisa wadamada laga yaabo inay batrool qodaan talooyinna ka siisa waxyaabaha ay u baahan yihiin: sida ay u maamulayaan, sida shariikaadka doonaya inay qodaan ula macaamilayaan, waxyaabaha ku haboon ee ay musuq-maasuqa iskaga celinayaan. Hay´ad u gaar ah waxyaabahaa oo horumarinta batroolka kala talisa dawladaha doonaya inay batroolka qotaan ayaa casuumada noo fidisay sidaasaanu ku nimi.
S/: Ma dawlad Somaliland ahaan baa la idiin soo casuumay oo ay idiinku timi xaruntiinii baarlamaanka mise dariiqo kale ayaa la idiin soo mariyey?
J/: Baarlamanku waad ogtahay oo wuu ka madax banaan yahay saddexda qaybood ee dawladda qeyb buu ka yahay sharcigana isagaa sameeya , si aanu anagu u fahamno oo qeyb anaga naga mid ahi u fahamto qeybaha kalena haddey suura gasho ay u yimaadaan oo u fahamsiiyaan waxyaabaha iyo talaabooyinka haboon in la qaado marka la gelayo waxyaabahaa batroolkoo kale ah. Iyagaa kolkaa toos noo casuumay baarlamaan ahaan baanay nagu soo casuumeen. Kolkaa sidaasaanu ku nimi.
S/: Dawladu ma ka war haysay casuumadiinan?
J/: Xukuumada waxba xidhiidh kalamaan yeelan, waayo saddexda qeybood ee dawladu ka sameysan tahay: sharci sameynta, fulinta iyo garsoorka way kala madax banaan yihiin, dawladda marti ugama noqon karno wixii talaabooyin ah ee aanu qaadeyno ee aanu u aragno inay golaha shaqadiisa tahay. Anagu fasax maanu bixinayn, casuumadna ma aanu sameynay kaalayana ma aanu odhaneyn. laakiin waxa aanu xaq u leenahay waxa socda arliga in aanu ogaano.
S/: Xildhibaan! dawladda ma ka dalbateen baarlamaan ahaan in ay idin hor keento heshiisyada ay shirkadaha ajnabiga ah la gelayso?
J:/ Dawladda had iyo jeer distoorka ayey ku taal iyana way og-yihiin. Anagu had iyo jeer waanu ku qeylinaa oo waxa aanu nidhaahnaa waxyaabaha lala gelayo… ayaan dhoweyd inaad og-tahay iyo in kale mooyaane waxa jiray nin baarlamanka ka tirsan, inta la yidhi heshiis baa lala gelayaa shariikad batrool ah inta uu hadlay uu yidhi waxa aanu xaq u leenahay in golaha la horkeeno. Jawaabtii waxay noqotay in aanay dawladi ogolaan arintaa oo wax lana hor keenay aanay jirin.
S/: Maadaama Dawladu aanay idiin horkeenin wax heshiis, shariikado Norwejiyinna hawl ka wadaan dalkii. Aqoon kororsigii iyo shirkadihii aad la kulanteen ma ka hesheen wax macluumaad ah oo muujinaya heshiisyada ay kaga hawl galayaan dalkii?
J/: Horta sida aan filayo dhaq-dhaqaaqyada tani dhowaan bay ahaayeen sharcigu ma dhigayo in dawladu heshiis aan sharciga la marin gasho waxase sharcigu odhanayaa waa in golaha la horgeeyaa wixii heshiis ah dabadeedna goluhu ka doodaa oo ansixiyaa. Waxa yimi waxba ma ogaateen, anagu macluumaadka aanu ogaanay ee fara badani ma aheyn heshiis haddey galeen dawladda iyo shariikaadkan batroolka halkani. Anagu waxa aanu ogaanaynay waxay ahayd dhaq-dhaqaaqyadaa ka jira dhulka aawadeed in aanu fahamno batroolku muxuu istaraatiijiyee leeyahay, side loo maamulaa, sharciyada la raacayaa side la isaga rabaa shariikaadka marka aad xidhiidh la yeelaynayso. Macluumaadkayagu mid aqooneed buu ahaa oo aanu dooneyno marku na hor yimaado in aanu noqono dad aqoontii leh danta ummadda ilaalin kara. Waxyaabaha ay nooga digayeen waxa ka mid ahaa shariikaadku had iyo jeer waxay doonayaan inay kaa bursadaan, inay iyagu ku maamulaan inay siday doonayaan kuu galaan dabadeedna markad hadhow ku dhacdo wax aad ka qaban kareysaa aanay jirin. Waxyaabahay nooga digayeen waxa ka mid ahaa sharci kolka hore haddaan la sameyn lagu shaqeeyo in shariikaadku ku jiidan karaan. Kolkaa si aan taasi u dhicin sidii aad isaga ilaalinaysay oo dhan ee aad uga faa´iidaysaneysay iyana ay kuu aqbali lahaayeen. Sidii aad musuq-maasuqa ka dhaca dunida saddexaad waliba waxyaabaha batroolka ku saabsan aad isaga ilaalin laheyd. Anagu macluumaadka ku saabsan waxyaabahaa iyo faa´iidooyinka batroolka iyo lacagtiisa sida la yidhaah iyo sida loo qodo oo ah intee in le´eg la qodayaa, saameynta uu ku yeelanayo degaanka. Anagu waxyaabahaas ayaan qaadaneynay oo fahamnay, laakiin khusuusiyan ma aanu daba socon xukuumadu maxay gashay.
S/: Wax masuuliyiina oo kale ma la kulanteen intad joogteen?
J/: Waanu la kulanay, baarlamanka nin baanu kala kulanay. Qadiyadan kala hadalneyna waxay aheyd Somaliland sidii loo aqoonsan lahaa iyo sidii looga caawin lahaa mashaakilka haysta, haddey aqoon tahay iyo haddey dhaqaale tahayba. Kolkaa PETRAD laga bilaabo hay´ado badan baanu marnay oo ama batroolka ku shuqul leh ama arimaha dibadu ka mid tahay, garyaqaanaan aragnay ku shuqul leh kuwa batroolka u sameeyey qawaaniinta iyo sharciga ay ku dhaqmeyso Norway ee ay sharikaadka kula dhaqmeyso. Kaa baarlamanteeriyanka ah ee aan kuu sheegayey qadiyadan kala hadlaynay waxay ahayd sidii koox baarlamenteris ah oo reer norway ah loo sameyn lahaa, kuwaasoo naga caawiya qadiyada aqoonsiga iyo sidii mucaawino labada naloo siin lahaa. Balan buu noo qaaday waan tegayaa buu yidhi iminka dhakhsaan u soo noqonayaa, arimaha dibadda, qolada mucaawinada iyo baarlamenteriyanka wixii aan isku deyi karo intaba waan isku dayayaa. Tii aanu kala hadlaynay waxay ahayd qadiyadda Somaliland in aanu had iyo jeer bandhigno oo nidhaahno waxaa iyo waxaas ayaanu qabsanay, sidaas ayaanu nahay, sidaas ayaanu dimoqraadiyada ugu dhaqanaa, kolkaa waxa aanu rabnaa dawladihiinan dimoqraadiga ahi inaad na caawisaan oo na aqoonsataan.
Waxa wareysiga qaaday
Filed under: Norge, Norway, Somaliland |
« Wiil 16 toban jir oo somali ah oo lagu toogtay kaam ku yaal Norway. GANACSATADA XOOLAHA SOMALILAND OO SOO DHAWEEYEY HESHIISKA XOOLAHA EE AL-JAABIRI »